Qalab Nadiif ah Semi-qoyan Mashiinka Mashiinka loogu talagalay Soo-saareyaasha Bacriminta Dabiiciga ah iyo Warshad | YiZheng
Ku Bacriminta Semi-qoyan ee Bacriminta Iyadoo La Isticmaalayo Burburka waxay leedahay gunno ballaaran oo qoyaan ah illaa 25% -55% oo ah walxo dabiici ah oo khamiir leh. Mashiinkaani wuxuu xaliyay dhibaatada burburinaysa noolaha ee leh qoyaan badan, wuxuu leeyahay saamaynta ugu wanaagsan ee burburinaysa walxaha dabiiciga kadib halsano.
Waa maxay Semi-qoyan Qalabka Mashiinka?
Ku Qalab Nadiifinta Qalabka Mashiinka waa qalab burburin xirfadle ah oo loogu talagalay maadada leh qoyaan badan iyo fiber badan. KuSare Mcayilka Mashiinka Burburka Bacriminta wuxuu qaataa rotors-yada laba-marxaladood ah, taasi waxay ka dhigan tahay inay kor iyo hoos u burburinayso laba-marxaladood. Marka alaabta ceyriinka ah lagu quudinayo mashiinka masraxa sare si loogu shiido, ka dibna loo qaado mashiinka mashiinka hoose si uu ugu sii wado shiidida budada ganaaxa si uu u gaaro qiyaasta walxaha ugu fiican ee geedi socodka kala-soocidda soo socota. Ma jiro mesh shabag ah oo ka hooseeya Qalab Nadiifinta Qalabka Mashiinka. Marka walxaha qoyan waa la jajabin karaa weligoodna lama xiri karo. Xitaa walxaha hadda laga soo qaaday biyaha waa la jajabin karaa, walwalna kama qabin inay xirmaan ama xirmaan. Ku Qalab Nadiifinta Qalabka Mashiinka waxaa badanaa loo isticmaalaa soosaarka iyo ka shaqeynta bacriminta dabiiciga ah, waxay saameyn wanaagsan ku leedahay alaabta ceyriinka ah sida digada digaaga iyo humic acid.
Waa maxay Qalabka Semi-qoyan ee Burburinta Qalabka loo isticmaalo?
Qalab Nadiifinta Qalabka Mashiinka waxaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo halsano kudaarista nafaqada dabiici ahaaneed, qashinka kubaxa qashinka guryaha magaalooyinka, cawska kaarboobka ah, qashinka miyiga, qashinka dabiiciga ah ee warshadaha ee cawska, taranka xoolaha iyo digada digaaga iyo wixii lamid ah.
Feature of Semi-qoyan Mashiinka Mashiinka
1. rotor ka Qalab Nadiifinta Qalabka Mashiinka dhismaha wuxuu qaadanayaa naqshad & qaab dhismeed caqli gal ah. Iyada oo garbaha laba-geesoodka ah, waxtarkeeda burburinaysa ayaa laba jibbaar ka badan mashiinnada kale ee wax burburiya. Qalabku wuxuu ka soo galaa qaybta wax lagu shiidayo daloolka quudinta, ka dib ayaa lagu burburiyaa budada wanaagsan.
2.It waxay qaadataa dubbayaal adag oo xirxiran. Jeexyada dubbayaasha ayaa loo been abuuray si loo ballanqaado inay xoog badan yihiin oo adag yihiin inay ku dheereeyaan nolosha adeegga.
3.Rakhka mashiinka bacriminta waxaa kuxiran saxan bir karbon oo tayo sare leh iyo sanduuqa birta. Waxay ka gudubtaa shahaado waafaqid wax soo saar adag iyo shuruudaha farsamada gaarka ah.
4.The Qalab Nadiifinta Qalabka Mashiinka iibku wuxuu ka kooban yahay laba lakab oo ah nidaamyo wax lagu shiido si loo jajabiyo qalabka si loo gaadho waxtarka ugu habboon.
5.Adopting drive suunka dabacsan. Mashiinka korantada ayaa wada sheayada suunka kaas oo ku wareejinaya awoodda dhidibka guud, taasoo ka dhigeysa inuu ku wareego xawaare sare si uu u burburiyo qalabka.
Faa'iidooyinka Mashiinka Nadiifinta Maaddada Semi-qoyan
1) Codsi ballaadhan iyo kalsooni sare. Mashiinkaan malahan salka shaashadda, sidaa darteed in kabadan 100 nooc oo walxo ah ayaa la burburin karaa mashiinkuna waligiis ma xannibi doono.
2) Dayactir fudud. Mashiinkaani wuxuu qaatay farsamada laba-geesoodka ah. Haddii dubbaha la xidho, markaa dubbeerka ayaa mar kale la isticmaali karaa ka dib marka la dhaqaajiyo meeshiisa.
3) Saameyn wanaagsan oo burburin ah. Mashiinku wuxuu adeegsadaa rotor-wareejiye laba-marxaladood ah, walxaha ugu horreeya ayaa lagu jajabiyaa qaybo yaryar ka dibna lagu jajabiyaa boodh wanaagsan.
4) Shaqada badbaadinta shaqaalaha, hawlgalkuna waa sahlan yahay. Waxay isticmaashaa tikniyoolajiyad tiknoolajiyad sare leh, hal qof oo keliya ayaa si fudud ugu shaqeyn kara, kaliya ma ahan mid ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, laakiin sidoo kale fududeeya dayactirka
Qalab Semi-qoyan Mashiinka Mashiinka Video Show
Waxyaabaha Semi-qoyan Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Cabbirka walxaha (mm)
Tirada Gawaarida Gaaban
130x50x5 = 70 gogo '
130x50x5 = 24 gogo '
180x50x5 = 32 gogo '
300x50x5 = 72 gogo '
180x50x5 = 36 gogo '
240x50x5 = 48 gogo '
350x50x5 = 48 gogo '
Hore: Double Ku marooji Extruding Granulator
Xiga: Mashiinka Xashiishka Bacriminta Mashiinka Xuduudaha
Hordhac Waa maxay Mashiinka Xashiishadda ee Bacriminta Urea? 1. Mashiinka Mashiinka Xashiishadda Urea wuxuu inta badan adeegsadaa shiididda iyo goynta farqiga u dhexeeya rullaluistemadka iyo saxanka gogosha leh. 2. Cabbirka nadiifinta ayaa go'aaminaya heerka walxaha burbursan, iyo xawaaraha durbaanka iyo dhexroorku waa la hagaajin karaa. 3. Marka kaadi-mareenka jirka uu soo galo, wuxuu h ...
Hordhac Waa maxay Cawsku & Burburka Xaabku? Bur burka Straw & Wood iyada oo ku saleysan dhuuqida faa'iidooyinka noocyo kale oo badan oo burburin ah iyo ku darida shaqada cusub ee jarista saxanka, waxay si buuxda uga faa'iideysaneysaa mabaadi'da jajabinta iyo isku darka tikniyoolajiyadaha burburka leh ee la garaacayo, la jarayo, isku dhaca iyo shiida. ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Bacriminta Kiimikada ee loo isticmaalo? Mashiinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta ee Kiimikada ayaa iska leh miligga qafis qafis dhexdhexaad ah. Mashiinkaan waxaa loogu talagalay iyadoo la raacayo mabda'a burburka saameynta. Marka baqashada gudaha iyo dibedda ay isku shaandheyso jihada ka soo horjeedka oo leh xawaare sare, maaddada ayaa la jajabiyaa f ...
Double-dariiq dhexaad Chain Machine Burburiyo Bacriminta Cr ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Xashiishada ah ee silsilad laba-geesle ah? Mashiinka Xuddunta Mashiinka Mashiinka ah ee loo yaqaan 'Double-axle Chain Crusher Mashiinka' Crusher looma isticmaalo oo keliya in lagu burburiyo burooyinka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxaa si ballaadhan loogu isticmaalaa kiimikada, qalabka dhismaha, macdanta iyo warshadaha kale, iyadoo la adeegsanayo saxanka silsiladda silsiladda bide ee MoCar. M ...
Hordhac Waa maxay Is-wadaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida isku roga? Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida iswada ayaa ah qalabka halsano ee ugu horreeya, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshad bacriminta dabiiciga ah, warshad bacriminta isku dhafan, dhoobada iyo warshadda qashinka, beerta khudradda iyo dhirta bisporus ee halsano iyo ka saarista ...